Ilay soavaly dia: ny toeram-ponenany sy ny karazany samy hafa | Soavaly Noti
Ny soavaly dia iray amin'ireo biby tsara tarehy, be voninahitra ary manan-kaja indrindra misy sy miara-miaina amin'ny olombelona. Zavaboary manan-tantara izay mpiara-dia amin'ny dia mahatoky nandritra ny taonjato maro. Na izany aza, ary na dia maro amintsika aza no mety mieritreritra amin'ny voalohany fa tsy izany no izy, mbola misy soavaly sasany izay nanohitra ny fizarana ny fiainany tamin'ilay zanak'olombelona, ​​ka nanalavitra ny fiompiana tamin'ny fomba rehetra, ary izany dia fantatra amin'ny hoe soavaly dia.
Ary io soavaly io koa dia tandindon'ny tanjaka, hoho, fikomiana ary fanahy malalaka. Ka tsy mahagaga raha voatahiry io fotokevitra io ary ankehitriny dia mbola misy ny mponina miaina eo afovoan'ny natiora na, farafaharatsiny, amin'ny fomba mitovy amin'izany.
Manaraka izany dia hiezaka izahay hanakaiky anao kely amin'ireo soavaly dia, ny fomba fiainany, ny fomban-dry zareo, sns.
2 Fihetsika soavaly dia
4 Taranaka soavaly dia
4.1 Soavaly soavaly
4.2 Soavaly semi-maroona
4.3 Soavaly madio na tena izy
5 Aiza no ahitanao soavaly dia ankehitriny?
Tsy mora ny mahita soavaly dia satria tsy biby fahita izy ireo. Ireo faritra izay nalain'izy ireo honenana dia, amin'ny ankapobeny, faritra misy ahitra sy kijana be dia be misy zavamaniry maharitra ary mando be. Ireo faritra ireo dia mifanitsy amin'ny lemaka lehibe sy malalaka ary malalaka mba hijerena ireo loza mety hitranga toy ny biby mpihaza amin'ny fotoana rehetra.
Na izany aza, ny toeram-ponenany dia mety miovaova kely ihany koa miankina amin'ny vanim-potoana na amin'ny vanim-potoana misy antsika. Ny soavaly dia somary mpifindrafindra monina, izay mahatonga azy ireo hivezivezy miankina amin'ny toetr'andro sy ny maro hafa. Amin'ny ririnina dia misafidy faritra be tendrombohitra na tsy mazava izy ireo, izay afaka manampy azy ireo hahita fialofana sy hiady amin'ny tsy fifanarahana vetivety. Efa amin'ny lohataona, izay manomboka ny vanim-potoanan'ny fiompiana, ary, ambonin'izany rehetra izany, amin'ny fahavaratra dia misafidy ireo toerana voalaza etsy ambony izy ireo.
Fihetsika soavaly dia
Marihina fa ireo soavaly ireo dia tsy biby mitokana, fa, toy ny tranga misy ny ankamaroan'ny ahitra, mivelona amin'ny omby na ondry aman'osy izy ireo an'ny karazana specimens tsy dia be loatra. Ireo omby sy omby ireo dia antsoina hoe vatosoa ary olona eo anelanelan'ny efatra sy roapolo izy ireo, mihoatra na latsaka. Amin'izany haremena izany, mahazatra ny iray amin'ireo olona mampihatra ny fitarihana ao anatin'ny vondrona. Ity anjara asa ity dia mazàna amin'ny lehilahy iray efa antitra, izay antsoina hoe lahy. manjaka na stud. Vehivavy maromaro sy ny zanany no miaraka aminy. Anisan'ny asan'ny soavaly ny miaro ny mpikambana hafa ary manakana ny lehilahy hafa hanandrana haka ny harem.
Ny lahy tanora kokoa, rehefa tonga amin'ny fahamatorana ara-nofo dia roahina amin'ny omby. Amin'izay izy ireo dia manomboka ny asany ho lasa soavaly ho avy ary mitarika vondrona vehivavy. Mandra-pahatongan'izany dia tsy mahagaga raha miara-mandehandeha miaraka ny lehilahy lahy maromaro.
Toy ny amin'ny havany any an-trano, ny soavaly dia mihinana sakafo madio ihany koa. zavamaniry, izay miaraka amin'ny fihinanana mineraly sasany izay misy sira sy sodium indrindra, izay manampy amin'ny famatsiana ny tsy fahampian-tsakafo mety hitranga.
Taranaka soavaly dia
Amin'ireo soavaly dia, afaka mametraka fanasokajiana isika, izay mankatoa na manana ny maripana ny niandohany, ary miteraka karazany telo samy hafa: soavaly soavaly, soavaly semi-maroon y soavaly madio na tena izy.
Soavaly boribory dia soavaly dia izay avy amin'ny soavaly fiompy. Soavaly navotsotra ho natiora izy ireo, nahavita nifanaraka tamin'izany ary nanomboka niteraka.
Amin'izy rehetra dia asongadinay, amin'ny lafiny iray, ny soavaly mustang, izay ireo izay monina any Andrefan'i Etazonia, ary izay midina avy amin'ireo soavaly entin'ny mpandresy Alemanina, dia manana lova soavaly Arabo sy Andalosiana ihany koa.
Isika koa dia manana ny soavaly namib, izay niavian'ireo soavaly alemanina. Hita any an'efitra Namib izy ireo, ka izany no anarany, ary 300 sisa ny isan'ny santionany sisa tavela.
Ary farany, misy ireo manana anaram-bosotra hoe soavaly brumbies, izay mifanitsy amin'ireo soavaly masiaka ao Oceania, ary indrindra indrindra an'i Aostralia. Izy ireo dia avy amin'ny soavaly fiompin'ny tantsaha taloha ao amin'io toerana io. Tena miavaka izy ireo noho ny halavany ary, tsy toa an'ireo mustangs sy soavaly any an'efitra Namib, maro dia maro izy ireo.
Raha ny tena izy dia tsy soavaly dia toy izany ireo soavaly ireo satria an'ny olona manana biby fiompy. Ny mitranga dia tsy mipetraka amin'ny toeram-piompiana na trano fitobiana izy ireo, fa amin'ny toeram-piompiana lehibe misy azy ireo semi-fahalalahana.
Any Espana dia tena fahita izy ireo, indrindra ny avaratra, miaraka amin'ny fanamafisana manokana ny vondrom-piarahamonina toa ny Basque Country. Ny ohatra mazava indrindra amin'izy ireo dia fantatra amin'ny hoe Soavaly camargue.
Soavaly madio na tena izy
Mampalahelo fa soavaly dia tsotra, izany hoe ireo izay mbola tsy nifandray tamin'olombelona na tamina soavaly nanana dia tsy misy intsony. Fa ilaina ny maneho hevitra fa tamin'ny fotoana nisy ireo.
Raha ny tena manokana dia nisy karazany roa ny soavaly dia: ny Soavalin'i Przewalski ary ny soavaly soavaly.
El Soavaly Przewalski nipetraka tany Azia afovoany, ary manana ny anarany amin'ny kolonely rosiana Nikolai Przewalski, izay nahita azy ireo ary nametraka azy teo imason'izao tontolo izao, zavatra iray izay nitarika ny fanjavonany.
Amin'ny lafiny iray, ny soavaly Tarpan dia monina ny faritra Azia Andrefana sy Eropa afovoany. Soavaly kely dia kely izy izay mitovy amin'ny lafiny maro, ny pony fantatsika ankehitriny.
Aiza no ahitanao soavaly dia ankehitriny?
Soa ihany fa mitombo ny ahiahy amin'ny fiarovana ny natiora sy izay rehetra manodidina azy. Izany dia nahatonga ny famoronana habaka maro hiarovana ny biby sasany izay atahorana ho lany tamingana. Ny iray amin'izy ireo dia soavaly dia.
En España, habaka maromaro no efa noforonina izay andraisan'ny soavaly dia ary nilalao andraikitra lehibe izy ireo. Miresaka toerana toa antsika izahay Salgüero de Juarros.
Ity toe-javatra ity dia nanjary miharihary tamin'ny sehatra eropeana ihany koa, ary valan-javaboary voajanahary maro no mihevitra ny mety hampidirina soavaly dia amin'ireo mpanofa kintana.
Ivelan'ny faritany espaniola sy Eoropa, misy firenena hafa izay manana soavaly dia eo amin'ireo biby niaviany, toy ny tranga Mongolia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Ilay soavaly dia
Tatoazy soavaly sy ny dikany